ဆေးမြှီးတိုလေးတစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆေးမြှီးတိုလေးတစ်ခု
Posted by နွယ်ပင် on Oct 11, 2011 in Creative Writing, Health & Fitness, My Dear Diary | 28 comments
မနေ့က တစ်နေ့လုံးအလုပ်တွေများနေတာနဲ့ နေ့လည်ဘက် အလုပ်မှာဘာမှမစားဖြစ်လိုက်တော့ နွယ်ပင်တစ်ယောက် အိမ်ပြန်ခရီးမှာ
ဗိုက်ဆာတာ ဟပ်ထိုးကိုလိုက်နေတာပဲ ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေ့ကဟင်းချက်နေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ အနံလေးတစ်ရှူရှူနဲ့ ဗိုက်ဆာနေတာ
အရမ်းအရမ်း အဲတာနဲ့ အဝတ်အစားတောင်မလဲတော့ဘဲ ထမင်းစားဖို့ ပြင်တော့ အမေက ရေချိုးပြီးမှ ထမင်းစားရမယ်တဲ့
ဟင်းရည်မကျက်သေးတော့ ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ ဟင်းရည်ကျက်ချိန်အတော်ပဲဆိုတာနဲ့ ရေကို မချိုးချင်ချိုးချင် တစ်ဗွန်းဗွန်းလောင်းချ
အကျီအမြန်လဲပြီး ထမင်းစားဖို့ပြင်တော့တာပေါ့ ။ ချက်ထားတာကလည်း တကယ့်ကိုစားချင်စရာ ငါးကြင်းဆီပြန်ဟင်း ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းချို
ကန်စွန်းရွက်ကြော်နဲ့ ငါးပီရည်တို့စရာဆိုတော့ ဗိုက်ဆာနေတဲ့ နွယ်ပင်တစ်ယောက် ခေါင်းတောင် မဖော်နိုင်တော့ဘူး ။
အားပါးတရစားလို့ တစ်လုပ်နှစ်လုပ်ပဲရှိသေးတယ် အမေက စကားလာပြောနေရော ဗိုက်ကဆာလို့ ထမင်းပဲဖိစားနေတာကို
အမေကလဲ မရဘူးစကားအတင်းလိုက်ပြော အဲတော့အမေပြောတာ မကြားလဲ အင်းလိုက်ပေးနေရတာပေါ့
(မဟုတ်ရင် မာသားကြီးက သူပြောတာ နားမထောင်ရင်လဲ စိတ်ကတိုသေးတယ် ) အဲ့မှာ
အင်းအလိုက်ပေးကောင်းတော့ ငါးရိုးဆူးပါလေ ရော ။ ထမင်းတောင် တစ်ပန်းကန်မကုန်သေးဘူး ငါးရိုးကဆူးတော့
ထမင်းကဆက်စားလို့မ၇တော့ဘူး အဲတာနဲ့ ရေတွေသောက်ချ ထမင်းအဖြူကြီးပဲ ဒီအတိုင်းမျိုချ မရဘူး ငါးရိုးကလည်း မကျတော့
လည်ချောင်းကနာလာရော ။ အမေက ငှက်ပျောသီးကို ဝါးမချပဲမြိုချလို့ပြောလို့ ငှက်ပျော်သီး (2) လုံးကို မျိုချနေတုန်း အမေကထပ်လာပြီး
ငှက်ပျောသီးမျိုချနေတုန်း ကိုယ်လမ်းမှာ ဆူးညောင့်တွေ ဖယ်ခဲ့တာရှိရင် အဲတာကိုတွေးပြီးမျိုချဆိုလို့ မျက်စိဆုံမှိတ်ပြီး
ငှက်ပျောသီးကို မရမကမျိုချနေတုန်း လမ်းမှာဖယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ဆူးညောင့်ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး မျိုချတော့လဲ မရပြန်ဘူး
နောက် အစ်မက လာပြီး ရေနွေးပူပူကို မက်ခွက်ထဲပြီးမော့သောက် ရေနွေးက အရိုးကို ပျော့ပြီးကျသွားလိမ့်မယ်ဆိုလို့
မတ်ခွက်ကြီးနဲ့ ရေနွေးတွေသောက်တော့လဲ မသက်တာ အဲတာနဲ့ ဆေးခန်းသွားရတော့မယ်ဆိုပြီး နာလို့ ငိုယိုပြီးအဝတ်စားလဲနေတဲ့
နွယ်ပင့်ကို အညာကရောက်နေတဲ့ အဒေါ်က ဘုရားရှိခိုးနေရာက မနေနိုင်တော့ပဲ ထလာပြီး သူတို့ဆီမှာတော့
အရိုးဆူးရင် ဆူးတဲ့နေရာအပေါ်လေးကနေ ကျောက်ချဉ်ကို ခပ်ပြစ်ပြစ်လေးသွေးပြီးလိမ်းပေးတယ် နောက် (10) မိနစ်လောက်နေရင်
တစ်ခါထပ်လိမ်း (3/4) ခါလောက်လိမ်းတဲ့ မြန်မြန်ပျောက်ချင်ရင်တော့ အာခေါင်ထဲထိနှိုက်ပြီးလိမ်းလို့ပြောလာတဲ့ ။
အဲတာနဲ့ နွယ်ပင်လဲ အာခေါင်ထဲထိတော့ မလိမ်းချင်ဘူး အပြင်ကနေပဲ လိမ်းမယ် တစ်နာရီလောက်စောင့်ကြည်မယ်
မသက်သာရင်တော့ ဆေးခန်းသွားပြမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး ငါးရိုးဆူးနေတဲ့ နေရာလေးကိုမှန်းပြီး ကျောက်ချဉ်ကို လိမ်းနေတာ
ဘယ်နှစ်ခေါက်မှန်းတောင်မသိဘူး ။ကျောက်ချဉ်လိမ်းပြီးလို့ နာ၇ီဝက် (45) မိနစ်လောက်လဲ ကြာတော့ လည်ချောင်းထဲက
မျက်သက်သက်နဲ့ ဆူးနေတာက မဆူးတော့ဘူး သက်သာသွားတယ် ။အဲတာနဲ့ ကျောက်ချဉ်ကို နောက်တစ်ခေါက်ထိမ်းလိမ်းပြီး
အိပ်ပျော်သွားတာ 9း00 ထိုးလောက်နိုးလာတော့ လည်ချောင်းထဲက ဆူးလည်းကျသွားပြီး နာကျင်တာလဲ သက်သာသွားခဲ့တယ် ။
ဒါကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေအတွက် ငါးရိုးဆူးလို့ ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆို ကျောက်ချဉ်သွေးလိမ်းဖို့ကို ဆေးမြှီးတိုလေး တစ်ခုအနေနဲ့
ပိုက်ဆံလဲ ယူပစ်သလိုကုန်သွားတယ် အဟဲ
ဟုတ်မယ် ကိုသစ်မင်းရေ အချဉ်ဓာတ်ကအရိုးကိုပျော့စေတာဖြစ်မယ်
သံပုရာသီးကို ညှစ်ပြီး စားပါလားလို့ အစ်မက ပြောပင်မယ့် အဲလို ချဉ်ချဉ်ကြီး
မစားချင်တာနဲ့ အဲဒီနည်းကို မလုပ်လိုက်ရဘူးလေ ..
နွယ်ပင်ကတော့ ငါးစားတိုင်း အရိုးက ခဏခဏဆူးတက်တယ်လေ
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်လောက် မဆိုးဘူး အခုတစ်ခေါက်က သွေးပါထွက်အောင်ဆူးတာလေ …
ကျေးဇူး နွယ်ပင်ရေ …. မီးကလဲ ငါးကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ ဒီနည်းလေး သိထားတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ ….
နွယ်ပင်ပြောမှ သတိရမိတဲ့ ဆေးမြီးတိုလေတစ်ခု လက်ဆင့် ကမ်းခြင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ကား/ရထား / လေယာဉ်များစီးကြတဲ့အခါ မူးဝေတတ် အော့အံတတ်သူများအတွက်
ကား/ရထား စီးလို့ မူးတတ်ရင်
ချင်း (ဂျင်း)ကိုမိမိလက်တစ်ဆစ်ဖြတ်ပါ ပြီးလျှင်အခွံခွာပါ ပါးစောင်မှာ ငုံထားပါ
ဘာစီးစီးမူးတတ်ရင် အဲလို ငုံပြီးစီးသွားပါ လုံးဝ မမူးတော့ကြောင်း အာမခံပါတယ်
ဒီကြားထဲမှ မူးလာတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ထိုငုံထားသောချင်းအား အနည်းငယ် ကိုက်ဝါးကာထွက်လာသော
အရည်အားမျိုချပါ တစ်ကယ်ပျောက်ကင်းတယ် ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်အားကျေးဇူးမတင်ပါနှင့်
ကိုဘီလူးကြီးပေးတဲ့နည်းတော့ ကြားဖူးပင်မယ့် တစ်ခါမှ မစမ်းကြည့်ဖူးဘူး
နွယ်ပင်ကြားဖူးတဲ့ နောက်တစ်နည်းကတော့ ကားစီးလို့ ခေါင်းမူးရင်
ချက်ကို ပါလာစတာနဲ့ လေလုံအောင်ကပ်ရင်လဲ ခေါင်းမမူးဘူးလို့ လဲကြားဖူးတယ်
ဒေါ်ဒေါ်နွယ့် ကိုယ်တွေ့ အရ
ဆူး ကို ကျောက်ချဉ် က နိုင်၏
မောင်ပေရေ နွယ်ပင်ပြောတာ ငါးရိုးဆူးရင်လို့ပြောတာနော်
ရွာသူ ဖွားဆူးနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်ပါကြောင်း ………….
ကျွန်မ ကြုံဖူးတာ ကိုပြောပြပါ့မယ်.. ကျွန်မ ပြီးခဲ့ တဲ့ နွေရာသီက ရခိုင်ပြန်တော့..နွယ်ပင်လိုပဲ ထမင်းစားရင်း ငါးရိုးစူးတာ..။ ငှက်ပျောသီးကို မ၀ါးပဲ မျိုချ တာရော ၊ ထမင်းဖြူကို မ၀ါးပဲမျိုချတာရော စုံနေတာပဲ.. ။ ငါးရိုးက လုံးဝ ကျမသွာဘူး..။ ရေသောက်ရင်ရော .. တစ်ခုခုစားရင်ရော နာနာ ပြီး နေတာ။ နောက်ဆုံးတော့ အကောင်းဆုံးနည်း တစ်ခု ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ ည နေပိုင် ထမင်းစားခါနှီး အမေ့ ကို သစ္စာ ဆိုခိုင်းလိုက်တယ်။ ဘုရားစင့်ရှေ့မှာ ၊ ထမင်ဖြူ ပုဂံလေး ကို ချပြီး အမေ သစ္စာ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ပုဂံ ထဲ က ထမင်ကို ဘုရား တရား သံဃာ၊ မိဘ ၊ ဆရာသမား ကို ဦးထိပ်ထားပြီး..5လုပ်မျိုလိုက်ပါတယ်..။ ၁ ပတ်အတွင်းမှာ အဲဒီငါးရိုး စူးလည်း မစူးတော့ဘူး နာလည်း မနာတော့ပါဘူး။ လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားပါတယ်.။
ငါးအရိုးကတော့ ဆူးလေ့ မရှိဘူး။
ငါးအရိုးဆူးရင်တော့ လည်ချောင်းထဲ လက်နှိုက်ပြီး အန်ထုတ်တာမျိုး အတွင်းဘက် မရောက်ရင် လက်နဲ့ ကော်ထုတ်လိုက်တယ်။ အခုထိတော့ နွယ်ပင်ပြောသလိုမျိုး အရိုး ကြီးကြီး မဆူး ဘူးသေးဘူး။
ဆူးရေ နွယ်ပင်ဆူးတာကလည်း ငါးရိုးက အကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူး
ငါးကြင်းရိုး သေးသေးမျှင်မျှင်လေးပါ ဒါပေမယ့် အမေပြောနေတာကို (မလေးမစား)
ဘာမှ မကြားဘဲ အင်း လိုက်နေလို့ထင်တယ် ဒီငါးအရိုးသေးသေးလေးက
သွေးထွက်အောင်ကို နာတာ ….
တနေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပုဇွန်တောင်ဖက်က အကင်ဆိုင်မှာ အကင်သွားစားကြတာ
ငါးကင်လည်းပါတော့၊ ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ ကြိုက်လွန်းလို့ အားရပါးရစားပစ်လိုက်တာ
ဟိုးအံသွားထဲမှာ ငါးရိုးမွှားတားလေး စိုက်သွားတာ
ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ဘာလိုလိုညာလိုလို တစ်ရူးလေးနဲ့ကွယ်ပြီး
တစ်ကြိမ်တည်းမရလို့ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ကြိုးစားလိုက်ရတယ်
ကိုယ်ချင်းကိုယ်ချင်း သူငယ်ချင်းတွေချည်းဆို ကိစ္စမရှိဘူး
ကျနော်ဒီရွာထဲကို စ၀င်ဖြစ်တာကလည်း ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ငါးရိုးစူးနေသလားဆိုတဲ့ post ကလေးကြောင့်ပါပဲ။ ဒီ ပို့စ်မှာ ရေးထားတာကတော့ ငါးရိုးစူးနေရင် ခေါင်းမော့ပြီး အာခေါင်တည့်တည့်ကို သံပုရာသီးအရည်ညှစ်ထည့်လိုက်ပါတဲ့။ ကျောက်ချဉ်ကတော့ တောတွေမှာ ရေတွေ အနည်ထိုင်အောင်လားမသိဘူး။ ထည့်တာတွေ့ဖူးတယ်။ ကျောက်ချဉ်က များရင် ပန်းသေတတ်တယ်ပြောသံကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။
လက်တွေ့ အသုံးကျတဲ့ နည်းလေးမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
သတ်ပုံလေးတစ်ခုတော့ အကြံပြုပါရစေ။ ”ငါးရိုးဆူးပါလေရော” စသော အသုံးများမှာ ကြိယာအနေဖြင့် သုံးလျှင် စူး ဟု သုံးသင့်ပါသည်။ ဥပမာ- ငါးရိုးစူးသည်။ ဆူးစူးသည်။ သံ စူးသည်။
ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်လို့ အကြံပေးခြင်းမျှသာဖြစ်ပါကြောင်း။
နွယ်ပင်ရေ ကျမတော့ တခါ ဆူးဘူးတယ်.. အိမ်မှာ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ လုပ်ကြည့်တာလည်း မကျတာနဲ့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ နားနှာခေါင်းလည်ချောင်း ဆေးရုံကိုရောက်သွားတယ်
အပြင်ဆေးခန်းကလည်း သွားတဲ့ အချိန်မဖွင့်သေးတာနဲ့..
အဲ့ဒီမှာ ဆရာဝန် မလာခင် တာဝန်ကျ နပ်စ်က ကျမ ကို ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီး လျှာကို ဆွဲထုတ်တာ မျက်လုံးတွေပါ ပြုတ်ထွက်လာမလားထင်ရတယ်.. နာလိုက်တာမှ
နောက်ဆရာဝန် လာမှ အဆင်ပြေသွားတယ်.. ကံကောင်းလို့
အဲ့ဒီကတည်းက မှတ်ကရောပဲ ငါးဆို .. စားသတိ မျိုသတိနဲ့ လုပ်နေရတယ် .
ကြိုက်တော့လည်း မစားပဲ မနေနိုင်ဘူး..
အခုနွယ်ပင်ရဲ့ ကျောက်ချဉ်ရယ်၊ ကိုသစ်မင်းရဲ့ သံပုရာနည်းရယ်ဆို အဆင်ပြေတာပေါ့.. ကျေးဇူးပါ..
အဲ …ကျမလည်း ယောင်ပြီး ” စူး” လို့ သုံးရမှာကိ ” ဆူး” လို့ ရေးမိတယ်…
အမလေး ပိုစ့် တစ်ခုလုံးကို အသိမှတ်ပြုထားတာပါလား
ရဲရဲကို နီနေတာပဲ …
ညက ပိုများသေးတယ်။ကျနော်ရသလောက် လိုက်+လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ခုလဲ ပေးလို့ရသလောက် ပေါင်းထားပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုဇာဂနာ ကိုအားကျလို့ လိုက်နှုတ်နေတာများလား
မောင်ပေ၏ စုံထောက်ရှော် ဦးလံဘားအားစေလွတ်ဖမ်းစီး ခိုင်းပေးပါရန်..။။။
မနွယ်ပင်ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တို့လည်း ငါးစားရင် အရိုးခဏခဏ စူးတတ်တော့ဒီနည်းလေးကို မှတ်ထားရအုံးမယ် နောက်လည်း ဒီလို ဆေးမြီးတိုလေးတွေ ရှိသေးရင် ဗဟုသုတရအောင်လို့ ပြောပေးအုံးနော်။
အစ်မနွယ်ပင်ပို့စ်က ဘာဖြစ်နေတာတုန်း ..ရဲရဲကိုနီလို့ … ။ အမြင်မတူတာကြောင့်မဟုတ်ပဲ တမင်တကာ လုပ်ထားပုံရတယ် … ။
အစ်မရေ … ငါးရိုးစူးတာကို သံပုရာရည်ညှစ်သောက်ရတယ်လို့ … ကြားဖူးပါတယ် .. ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး … ။ etone ငါးရိုးစူးတုန်းကတော့ … လည်ချောင်းထဲကို ညှပ်နဲ့ ဆွဲထုတ်လိုက်တာပါပဲ … ။ မဟုတ်လျှင် ငှက်ပျောသီးလည်းမရ… ထမင်းလက်တဆုပ်လောက်မျိုလည်းနာနဲ့ … အမြန်ဆုံးနည်းကတော့ .. လူသုံးယောက်လောက်ချုပ်ပြီး .. အာခေါင်ထဲကိုစိုက်နေတဲ့အရိုးညှပ်နဲ့ ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တော့တယ် … ။
ဘာရိုးစူးတယ်မှတ်လဲ … သေးသေးပိန်ပိန် .. ငါးဖယ်ရိုးပါ ..သေးလွန်းလို့ … ထုတ်မရတာ
etone ရေ မနေ့ကတော့ ပိုစ့်တစ်ခုလုံး ရဲနေပင်မယ့် ဒီနေ့တော့
ပြန်လည် စိမ်းလန်းနေပါတယ် ….
ငါးရိုးက သေးလေ ထုတ်ရခက်လေပဲနော် ………..
မမနွယ်ပင် … သမီးက စိမ်းတိမ်းတိမ်းလေးတွေပဲမြင်ရတယ် … ရဲတဲတဲ တွေမမြင်ရဘူး
ကိုးခရိုင် စိမ်းလန်း စိုပြေရေး စီမံချက်ပြီးသွားလို့ပါ မင်းသမီးလေးရေ
ဒါနဲ့ … မင်းသမီးလေးပျောက်နေတာ .. ဘယ်ကမ္ဘာများရောက်နေပါလိမ့်နော် …
ကိုပေါက် ရိုက်ခဲ့တဲ့ တောင်ကြီးနားကရေတံခွန်ပုံတွေထက်တောင်
နွယ်ပင့် ပို့စ်က ကွန်းမန့်တွေက စိမ်းလန်း နေပါလား။
ရွာထဲ လက်သရမ်းတဲ့လူတွေ ရှိနေတာတော့သေချာပြီ ။ အရေမရ အဖတ်မရနဲ့ ရယ်စရာတော့ကောင်းသား ။
နွယ်ပင်ရေ အကောင်းဆုံး အရိုးသက်သာအောင်လုပ်တဲ့နည်းကတော့ စနပ်လေးနဲ့ ညှပ်ထုတ်တဲ့နည်းပါပဲ